ड्रग र पूरक अन्तर्क्रिया तपाईले जान्नु पर्छ - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी कम्पनी कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस भारी खेल समुदाय चेकआउट औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> कसरी पूरकहरूले औषधीसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन्
केहि औषधि खाना लेबल लेबल आयो। तपाईंले त्यो सुन्नुभएको होला निश्चित गोलीका साथ अंगूरको रस पिउनु हुँदैन । तर के तपाईंलाई थाहा छ त्यहाँ पूरक अन्तर्क्रियाहरू धेरै छन् कि प्रभावकारिता बदल्न वा तपाईंको औषधीको साइड इफेक्ट बिगार्न सक्छ। धेरै व्यक्तिहरूले गर्दैनन्, र त्यसले खतरनाक लागो ड्रग अन्तरक्रिया निम्त्याउँछ
पूरकले औषधीसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्दछ?
आहार पूरकहरू लोकप्रियतामा बढ्दै छन् र कतै चाँडो जाँदै छैनन्। वास्तवमा, आहार पूरक बजार २० 20२ सम्ममा पूरै २ billion8 अर्ब डलर हुने अनुमान छ। यो अनुमान गरिएको छ करीव% 68% अमेरिकीहरूको आहार पूरक प्रयोग गर्दछ र त्यो 84 84% अमेरिकीहरूले सुरक्षा, गुणस्तर र उनीहरूले लिने खुराकको प्रभावकारितामा विश्वास व्यक्त गर्दछन्।
यद्यपि त्यहाँ छन् ,,3०० अलग आहार पूरक , जस मध्ये धेरै व्यवस्थित अध्ययन गरिएको छैन। यो अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि धेरै पूरकहरूले शरीरमा केहि एन्जाइमहरूलाई औषधी मेटाबोल गर्ने तरिकामा असर गर्न सक्छ। तिनीहरू एन्जाइमहरूलाई औषधी तोड्न सक्ने क्षमतालाई अवरोध पुर्‍याउन सक्छ, सम्भावित विषाक्त तहसम्म औषधि निर्माण गर्न। अरूले एक औषधि बिग्रिएको दर बढाउन सक्दछ, यसलाई कम प्रभावकारी बनाउँदै। आधा भन्दा बढि विरामी रोग वा क्यान्सर रोगीहरूले पूरक आहार प्रयोग गर्छन् पर्चेको औषधि सहित।
Common सामान्य पूरक अन्तर्क्रिया
१. सेन्ट जोन वर्ट
डिप्रेसन र थकान कम गर्नका लागि अभिप्रायले, यसले गर्भनिरोधक, एचआईभी / एड्स औषधि र एन्टी-रिजेक्शन ड्रग्सको प्रभावकारिता कम गर्न सक्छ। ओटीसी खोकीको औषधि वा एन्टिडप्रेससन्टहरूसँग सेन्ट जोन्स वर्टको संयोजनको कारण हुन सक्छ सेरोटोनिन सिन्ड्रोम , जुन एक खतरनाक, सम्भावित जीवन-जोखिमपूर्ण अवस्था हो जसले धेरै रक्तचाप परिवर्तनहरू निम्त्याउन सक्ने धेरै सेरोटोनिनको निर्माणबाट निम्त्याउँछ। सेन्ट जोन्स वर्टले अंग प्रत्यारोपण बिरामीहरूमा एन्टी-रिजेक्शन ड्रग्सको स्तर पनि कम गर्न सक्छ।
सम्बन्धित: सेन्ट जोन्स वर्टको बारेमा तपाईले सबै कुरा जान्नु पर्छ
दुई चार G को (अदुवा, लसुन, ginseng, र ginkgo)
यी चार लोकप्रिय पूरकहरूले विभिन्न औषधीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्, जस्तै दैनिक एस्पिरिन सहित रगत पातलोमा बिरामीहरूमा रक्तस्रावको जोखिम बढाउन। यदि बिरामीहरूको शल्यक्रिया भइरहेको छ भने, डाक्टरहरूले कम्तिमा एक वा दुई हप्ता अघि पूरकहरूको प्रयोग रोक्न सल्लाह दिन्छन्।
अनुमान गरिएको माइग्रेन, हृदय रोग, र थकान , म्याग्नीशियम पूरकले एन्टिबायोटिकको शोषण घटाउन सक्छ र रक्ता पातलोको अवशोषण बढाउन सक्छ।
कसरी ड्रग र पूरक अन्तर्क्रियाबाट बच्ने
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा फार्मासिष्टसँग कुरा गर्नुहोस् । जब नयाँ प्रिस्क्रिप्शन वा पूरक सुरू गर्दा, यसमा केही अनुसन्धान गर्न उत्तम हुन्छ। तपाईको चिकित्सकलाई सोध्नुहोस् कि यदि तपाईको उपचार संग केहि आहार सम्बन्धी चिन्ताहरु छन्। को पूरक र एकीकृत स्वास्थ्य को लागी राष्ट्रिय केन्द्र (NCCIH, पहिले NCCAM) पनि प्राय: प्रयोग हुने पूरकहरूका लागि राम्रो स्रोत हो।
तपाइँको खाना राम्रोसँग जान्नुहोस्। कुन खानाहरू खाई रहेछ भन्ने कुराले तपाईंलाई सिफारिस गरिएको दैनिक रकममा कुन पूरक पदार्थहरूले धक्का दिन सक्छ भन्ने निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।
औषधि लेबलहरू पढ्नुहोस्। औषधि लेबलले तपाईंलाई कुन खाद्य पदार्थ वा पेय पदार्थहरू बेवास्ता गर्ने बताउनेछ, जस्तो कि रक्सी। औषधिको सामान्यतया चेतावनी लेबलहरू हुन्छन् जुन तपाईंले अवश्य याद गर्नु हुन्छ र पालना गर्नुहुन्छ।
तपाइँको डाक्टर अप-टु-डेट राख्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ कुनै नयाँ पूरक सुरु गर्नुभन्दा पहिले वा डाईट परिवर्तन गर्न भन्दा पहिले तपाइँको डाक्टर वा फार्मासिष्टलाई भन्नुहोस्। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ नयाँ औषधीय औषधि सूचीमा तपाइँको मेडिकल रेकर्ड मा थप गर्नुहुन्छ।
सावधानी अपनाउनुहोस् जहाँ तपाईं पूरक खरीद गर्नुहुन्छ। सामान्यतया, अमेरिकामा औषधी किन्न सुरक्षित छ, एक विश्वसनीय स्रोतबाट तपाईको स्थानीय फार्मेसी जस्ता। किनभने आहार पूरक खाना को छाता अन्तर्गत वर्गीकृत गरिएको छ, एफडीए (संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन) समीक्षा गर्दैन सुरक्षा र प्रभावकारिताको लागि बजार हुनु भन्दा पहिले तिनीहरूलाई।
कसरी घर मा एक संक्रमण को उपचार गर्न को लागी
यदि तपाइँ पूरक अनलाइन खरीद गर्नुहुन्छ, एफडीए चेतावनी दिन्छ त्यो धोखाधडी वा हानिकारक हुन सक्छ। स्वस्थ आहार र पूरक आहार लिनु स्वस्थ जीवनशैलीको मुख्य अंश हुन सक्छ - र यदि तपाईं राम्रोसँग तयारी र सञ्चार गर्नुहुन्छ भने तपाईंको औषधीहरूको अवरोध हुनुहुन्न।
कसरी कलेज को लागी तपाइँका बच्चाहरु लाई खोप - प्रिप
केटाहरु कसरी खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउँछन्
भरीएको नाक र घाँटी दुखाइ को लागी सबै भन्दा राम्रो कुरा
epsom नुन र सिरका खुट्टा कवक फ्याँक्नुहोस्
के हुन्छ यदि तपाइँ एन्टिबायोटिक लिन बन्द गर्नुभयो
खमीर संक्रमण को लागी चिया रूख को तेल को उपयोग गर्नुहोस्
ग्लिपिजाइड को लागी काम गर्न कती समय लाग्छ?